ABO'n dhimma waldhabdee mootummaa waliin qabu irratti hirmaannaa garee sadaffaa gaafate - BBC News Afaan Oromoo
Dhaabi Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaan durfamu mootummaa waliin mari'achuuf hirmaannaa qaama sadaffaa gaafate.
Ibsa dhaabichi kaleessa baasen ''keessattuu dhimma WBO irratti waltahiinsa haaromsuu fi jajjabeessuuf (to consolidate) bifa haaraadhaan bakka gareen 3ffaa jirutti irra deebi'amee haala haaraa kana akka furuu danda'utti akka wal haasawamu waamicha goona,'' jedheera.
Kanaan dura yeroo Ertiraa tureyyuu dhaabi kuni qaama sadaffaa gaafataa ture. Haa ta'u malee, ifa hintaane.
'Dubbifnee kadhannee fidne waraanamuu hin qabnu'
Guyyaa waligalteen baatii Hagayyaa keessa mootummaa waliin taasifame Dubbii Himaan dhaabichaa Obbo Toleeraa Adabaa ''Qaamni sadaffaa qaamaan argame hinjiru, garuu warreen quba qabaachuu malan qubuma hin qabaatu jechaadha,'' jechuun BBC'tti dubbatanii turan.
Ibsa dhaabichi kaleessa baaseen erga waligalteen taasifame booda mootummaafi sirnichi ''bakka irraa waan hin sossooneef'' lammiileen akkuma durii dararaa argaa jiru jechuun eera.
Ibsaa Afaan Oromoo fi Afaan Amaaraan baheen kan afaan Amaaraa irratti ''mootummaan adeemsaafi ejjennoo farra dimookiraasii irraa waan hin sochoonef,'' jechuun himata.
Akka sababaattis, 'mootummaan lola baneera, ukkaamsaa, hidhaafi ajjeechaa' raawwataa jira jechuun tarreessa.
Dabalataanis, duulli maqa balleessii dhaabicha irratti raawwataa akka jiru kan dubbatu ibsi kun ''ummanni Oromoo Mootummaan kun lola gaggeessaa jiru kana akka dhaabu dhiibbaa irratti gochuu'' qaba jechuun gaafata.
Poolisiin federaalaa lama Hidha Laga Fincaa'aa eegan 'ajjeefaman'
Haala hanga yoonaa jirun, dhaabbileen ODP fi ABO yeroo adda addaatti ibsa baasanin kan wal himataa turan yoo tahu, xinxaltoonni siyaasaa fi hayyuuleen gidduutti ummanni nagaa miidhamaa jiraachuu dubbatu.
Dhimma kana irratti waan dabalataa gaafannee kan isin biraan geenyu taha.